Darajada ereyga ee boggaaga
Furaha istiraatiijiyadda suuqgeynta mashiinka raadinta ee guuleysta ayaa ah fahamka ereyada muhiimka ah ee martida mashiinka raadinta ay u adeegsanayaan inay raadiyaan shirkaddaada. Waad la yaabi doontaa inta shirkadood ee aan la hadlo ee aan samayn wax cilmi baaris ah.
Natiijada ah inaadan cilmi baaris ku sameynin istiraatiijiyad suuqgeynta internetka ah ayaa ah in shirkaddaadu dabaysha u aqoonsato ereyo aan khusayn - soo jiidashada dadka soo booqda ee khaldan ee websaydhkaaga ama bartaada. Google wuxuu leeyahay mid fudud aaladda ereyga muhiimka ah ee raadinta taasi waxay falanqeyneysaa boggaaga waxayna ku siineysaa jawaab celin ku saabsan ereyada muhiimka ah iyo weedhaha la helay start bilow wanaagsan oo lagu arko haddii aad ku socoto wadada saxda ah.
Markaad sii wado kormeerka ereyada muhiimka ah iyo bartaada, Raadinta Raadinta Google waxay bixisaa taariikhda ereyada lagaa helay makiinadaha raadinta, iyo sidoo kale ereyada ay baarayaasha ku riixayaan boggaaga.
Waxaase la yaab leh, in kasta oo aaladaha Google midkoodna uusan istiraatiijiyadda oo dhan wada gelinaynin agab istiraatiijiyadeed oo ballaadhan oo loogu talagalay shirkadaha si ay u falanqeeyaan ereyada muhiimka ah, u barbar dhigaan tartanka, una la socdaan qiimeynta toddobaadlaha ah. Taasi waa meesha Xeebaha wuxuu soo galayaa sawirka.
Xeebaha waa qalab aad u adag oo adag oo loogu talagalay falanqaynta Keyword iyo Search. Waa tan liiska kooban ee astaamaha:
Ku soo hel boggaga tartamayaasha ereyada muhiimka ah ee Google
Soo hel liiska ereyada muhiimka ah ee Google goob kasta
Hel liiska ereyada muhiimka ah ee AdWords goob kasta
Ka hubi tartamayaashaada degitaanka-bogagga taraafikada SE iyo AdWords
Baadh ereyada key-long-tail ee goob kasta
Ku qiimee taraafikada SE iyo AdWords taraafikada goob kasta
Ka eeg kharashka ku baxa adWords
Hel keywords la xidhiidha qarsoodi ah (iyo qiimo jaban) si aad u hagaajiso ololahaaga AdWords
Raadi xayeysiiyayaal suurtagal ah goob kasta
Raadi iibiyeyaasha taraafikada ee boggaaga
Oo hadda la bilaabay Algorithm-ka Google ayaa isbeddelaya si loo hubiyo natiijooyinka raadinta moobiilka kaliya waxay leeyihiin bogag moobiil ah Xeebaha ayaa sidoo kale bilaabay kormeerka raadinta moobiilka sidoo kale!
Si aad u hubiso saaxiibtinimada degel websaydhka ah, tag Xeebaha Guudmarka, oo qor magaca websaydhka. Qeybta kore ee warbixinta, waxaad ku arki doontaa xulasho kuu oggolaaneysa inaad ka beddesho xogta desktop-ka una wareejiso xogta moobiilka. Guji astaanta saxda ah si aad u daawato moobiilka Analytics xogta iyo muujinta muuqaalka degel ee aaladaha mobilada.
Qalabka 'Mobile Performance widget' ayaa muujinaya saamiga URL-yada websaydhkaaga ee ka muuqday SERP-yada oo leh calaamadda “mobiil-saaxiibtinimo,” kuwa aan lahayn.
Jaantuska Waxqabadka Goobiddu wuxuu muujinayaa tirada ereyada muhiimka ah ee degelku ku qiimeeyo 20-ka ugu sarreeya moobiilka natiijooyinka raadinta ee Google.
Jaantuska Qaybinta Jagada ayaa muujineysa sida loo qeybiyo ereyada muhiimka ah ee degelku u qiimeeyo natiijooyinka raadinta moobiilka ee ugu wanaagsan Google ee 20ka ah.
Natiijooyinka waxaa soo ururiyey mobiil-saaxiibtinimo iyo mobile-saaxiibtinimo shuruudaha. Waxaad arki kartaa ereyadaada muhiimka ah ee ugu muhiimsan.
Waxaad sidoo kale kafiirin kartaa tartamayaashaada ugu sareeya raadinta moobiilka.
Waad arki kartaa xog la mid ah natiijooyinka raadinta lacag bixinta ah.
Si aad u aragto sida degelku u kala sarreeyo natiijooyinka raadinta dabiici ah ee mobilada, u gudub Xeebaha Research Cilmi baaris dabiici ah → Mawqifyo. Warbixintani waxay liis garaysaa ereyada muhiimka ah ee degelku ku qiimeynayo natiijooyinka raadinta moobiilka ee ugu sarreeya Google ee 20, iyo booska domain ee mid kasta oo ka mid ah.
URL-yada la calaamadeeyay mobiil-saaxiibtinimo natiijooyinka raadinta waxaa lagu calaamadin doonaa astaanta taleefanka gacanta
Tirada badan ee bogagga aan lahayn astaantan waa in loo tixgeliyaa inay tahay digniin, maxaa yeelay boggaaga ayaa la ciqaabi karaa. Si looga fogaado ciqaab ka timid Google isla markaana loo hagaajiyo khibradaha raadinta moobiilka ee adeegsadayaasha websaydhkaaga, waa inaad ku hagaajisaa boggagaaga sida ku cad dhaqamada moobiilka ku habboon Waxaan ku talinaynaa naqshadeynta websaydhka.
Aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee rajadaada iyo macaamiishaadu adeegsanayaan si ay kaaga helaan adoo adeegsanaya matoorada raadinta ayaa lagama maarmaan u ah guushaada. Sameynta degel qurux badan, xog-ogaal ah, mareeg heer caalami ah waxtar ma leh haddii aan lagu helin raadinta ku habboon! Balooggeygu runti waa tusaale weyn… Waxaan ku koray goobta si dabiici ah oo waxaan sii waday inaan ku daro waxyaabo sidaan u arkay inay tahay mid xiiso leh. Hada aniga ilaali darajada ereyga si joogto ah!
Natiijadu waxay tahay in badan oo ka mid ah taraafikada aan khuseeyo lagu soo qaatay qiimeynta mashiinka raadinta dabiiciga ah. Haddaan fulin lahaa falanqeyn keyword ah oo dhammaystiran 1,600 dhejisyo blog ah ka hor oo aan hubiyo inaan u isticmaalay ereyadaas muhiimka ah si hufan, shaki iigama jiro inaan hoggaamin doono xirmada inta badan mowduucyada tikniyoolajiyadda suuqgeynta.
Tags: qiimeynta raadinta desktophel darajokeyworddarajada keywordqiimeynta raadinta moobiilkadarajo ahaan keywordsemrush
Sidee Hoggaaminta Loogu Abuuri karaa Qalabaynta Suuqgeynta
Jul 13, 2015 markay tahay 11:31 PM